Isikhala sesimanje esine-charm yomlando
(76 okushiwo abanye)
Marshfield, Wisconsin, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Amy
Yenza lo mlando othokomele, 2100 square ft ube yikhaya lakho lokuphumula ngenkathi use-Marshfield. Kungakhathaliseki ukuthi usedolobheni ngebhizinisi noma ukuzijabulisa, uzoba imayela noma ngaphansi ukusuka ezindaweni zokuthenga, edolobheni kanye nesikhungo sezokwelapha. Endaweni ephephile nethule, ngaphesheya kwe-Columbia Park, uqinisekile ukuthi uqala usuku lwakho kahle ngenkomishi yekhofi/itiye elishisayo. Lungiselela ukudla ekhishini elikhulu futhi udle etafuleni lokudlela ukuze nihlanganyele imicimbi yosuku. Bese ufakwa emashidini kakotini athambile ukuze ulale.
Indlu inamapulangwe okuqala e-1922 kanye namapulangwe aqinile anamagumbi okulala amane kanye namakamelo okulala abanzi. Kukhona iwasha nesomisi esizeni ngakho azikho izintaba zokuwasha lapho ufika ekhaya.
4.96(76 okushiwo abanye)
Jabulela amakhonsathi ehlobo e-Columbia Park ngoLwesithathu kusihlwa noma ubambe umdlalo webhola e-Hackman Field. I-Main Street ingamabhulokhi ama-2 kuphela futhi inikeza izitolo zekhofi nezitolo zasendulo eduze.
Le ndlu i-centrist kakhulu endaweni nayo yonke into eMarshfield!
Abanikazi bahlala ngaphandle kwesayithi kodwa bahlala betholakala uma kudingeka. Ifika noma nini ngemva kuka-3:00 futhi kungenwa ngebhokisi lokukhiya emnyango ongemuva.
Hlola ezinye izinketho ezise- Marshfield namaphethelo